सङ्क्रमितको उपचार खर्च हुनेबाट लिने र नहुनेलाई दिने ! – Deurali News
४ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०३:०६ October 20, 2020
कोरोना सङ्क्रमितले उपचार खर्च आफैं ब्योहोर्नुपर्ने निर्णयबारे तिब्र आलोचना भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्णयबारे प्रस्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमितले उपचार खर्च आफैं तिर्नुपर्ने निर्णयबारे प्रष्ट्याउँदै उपचारको क्रममा राज्यले पैसा हुनेबाट लिने र नहुनेलाई दिने नीति अख्तियार गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले राज्य कोषबाट उपचार हुने मापदण्ड समेत निर्धारण गरेको छ । जसमा एकल महिला, विपन्न, अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतलाई परिभाषित गरिएको छ ।
प्रवक्ता डा. गौतमले भन्नुभयो, “उपचारको प्रक्रियालाई थोरै परिवर्तन गरिएको छ, क्षमता हुनेले खर्च तिर्ने र नहुनेलाई राज्य कोषबाट उपलब्ध गराइनेछ ।” उनले थपे, “असहाय, एकल महिला, अपाङ, अग्रपंक्तिमा रहेर काम -गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको स्वास्थ्य उपचार व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्नेछ ।”
यसअघि कोभिड–१९ सङ्क्रमितको मृत्यु हुँदा नेपाली सेनाले साबधानी अपनाएर शव व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । प्रवक्ता डा. गौतमले शवबाट कोरोना सङ्क्रमण सर्ने जोखिम न्यून रहेकोले परिवारजनले मापदण्ड अपनाएर गर्दा समस्या नहुने तर्क गरे । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
डीबी गुरुङको नयाँ गित “न्याउली चरी” को छायांकन सम्पन्न
२३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०४:३७ Deurali News 0
नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री
२४ बैशाख २०७६, मंगलवार ०५:३२ Deurali News 0
मोडल निशा खालिङ अभिनित “तिमि त अचेल” सार्बजनिक(भिडियो सहित)
१८ भाद्र २०७८, शुक्रबार १५:१२ Deurali News 0